Iitshathi zeCarb zeendidi ezili-17 zewayini - Iwayini Ne Impilo
Ngelixa iwayini iqulethe iikhabhohbhodi ezinjengeemveliso ezininzi zomdiliya, umzimba wakho uzenza ngokwahlukileyo kunangezizo iziselo ezinxilisayo. Ukuba ubala iikhabhohbhayithiUnokumangaliswa kukuba zingaphi iikhabhohombe kwiglasi yewayini. I-Champagne eyomileyo yeyona wayini isezantsi ye-carb ene-1 gram nje ye-carbs ngokusebenza, kodwa ezinye iwayini ezomileyo nazo ziphantsi ngokufanelekileyo kwii-carbs ngokunjalo. I-off-dry, i-semi-sweet, i-sweet, kunye ne-sweet wine zinezixa eziphezulu ze-carb kwaye azihambelani nendlela yokuphila ephantsi ye-carb.
Itshathi yeCarb yeWhite White kunye neeRosé Wines
Abamhlophe abomileyo kunye nee-rosés banoluhlu olubanzi lwee-carbs ngokusebenza kunokubomvu, ngeChampagne eyomileyo ukubheja kwakho okungcono kwi-1 gram nge-5 i-ounce yokukhonza, kulandele iigramu ezi-3 zee-carbs ngeewisi ezintlanu zerosé.
Iinyani ezinomdla kwiwayini
I-Champagne kunye neNdidi eziDlamkileyo zewayini ezinemifanekiso
Abaqalayo Isikhokelo sewayini Igalari
Oku kulandelayo luluhlu olufutshane lwee-carbs iniwayini ezimhlophe ezidumileyo, ekubhekiselwe kuyo Isiseko sedatha ye-USDA .
ndifuna umyeni wam wangaphambili abuye
IiCarbs kwiDry White kunye neRosé Isiselo somdiliya
Isiselo somdiliya Inani leeOunces Inani leeCarbs
Ishampeyini Ii-ounces ezi-5 1 gram
Yomileisiselo somdiliya esibomvu Ii-ounces ezi-5 2.9 iigram
USauvignon Blanc Ii-ounces ezi-5 3.01 iigremu
UPinot Grigio/ IPinot Gris Ii-ounces ezi-5 3.03 iigrem
Chardonnay Ii-ounces ezi-5 3.18 iigrem
IGewürztraminer Ii-ounces ezi-5 3.8 iigram
UChenin Blanc Ii-ounces ezi-5 4.9 iigrem
YomileRiesling Ii-ounces ezi-5 5.54 iigrem
Itshathi yeeCarbs kwiDry Red Wine
Iwayini ezibomvu ezomileyo zonke zinamanani afanayo ee-carbohydrate-ukusuka kwi-4 gram ukuya kwi-5.5 gram nge-5 i-ounce. Ezona carbs ziphantsi kwiwayini ebomvu yi-non-Burgundy Pinot Noir, ngelixa eyona iphezulu yiPinot Noir yase-Burgundy. Ngelixa kukho iwayini ezibomvu ezimnandi kunye newayini ebomvu yeedessert, ayiqhelekanga ngendlela eyothusayo, kodwa qiniseka ukuba iwayini ebomvu oyithengayo yomile.
Nalu uluhlu lwezinto ezomileyo ezomileyoiwayini ebomvukunye ne-carbohydrate count ngokwe-USDA.
IiCarbs kwiwayini ebomvu ebomvu
IPinot Noir Ii-ounces ezi-5 3.4 iigram
IShiraz / iSyra Ii-ounces ezi-5 3.79 iigram
ICabernet Sauvignon Ii-ounces ezi-5 3.82 iigrem
Isi-Sangiovese (Chianti) Ii-ounces ezi-5 3.85 iigram
Ingqele Ii-ounces ezi-5 4 iigrem
UPetite Sirah Ii-ounces ezi-5 4 iigrem
Malbec Ii-ounces ezi-5 4.1 iigram
Zinfandel Ii-ounces ezi-5 4.2 iigrem
IBurgundy Ii-ounces ezi-5 5.46 iigram
Njengomgaqo oqhelekileyo, inkulu iwayini, kokukhona inyusa inani le-carb. I-lighter i-bodyweight iwayini, i-carb ephantsi iyabala. Ngalo lonke ixesha jonga iilebheli okanye ubize ulwazi ngesondlo malunga nayiphi na iwayini ngaphambi kokuba uyisebenzise ukuba unenkxalabo malunga nokubala kwe-carb.
Amagama abonisa ukuba iwayini iphezulu kwiiCarbs
Ukuba ubala iikhabhathi zakho, qiniseka ukuba iwayini oyithengayo yomile. Gwema amagama kwileyibhile njengale:
Zonke iwayini ezibhalwe ngala magama zinomxholo osele wentsalela opompa ukubala kwe-carb yeewayini. Ukuba iwayini inencasa ngokwendalo iswiti, iphezulu kwiswekile eseleyo kwaye ke ngoko ineikhabhohbhayithi.
IiCarbs kwiiVini eziQinisekisiweyo
Kuya kufuneka uyiphephe iwayini ene-fortified, ephezulu kwi-carbs kune-reds eyomileyo kunye nabamhlophe.
indlela yokufumana amabala ezinto zokucoca ngaphandle kweempahla
IMuscat de Setúbal
Ukuqonda iiCarbs kwiwayini
Xa uninzi lwabantu lucinga ii-carbohydrate, bacinga ngokutya okunesitatshi okanye okusela kakhulu kumxholo weswekile. Iwayini eyomileyo ayinayo isitashi kwaye incinci kakhuluiswekile eseleyo. Iswekile yendalo eyenzeka kwiidiliya iguqulwa ibe butywala ngexesha lenkqubo yokubila. Azikho iicarbohydrate zobuchwephesha ewayinini, kodwa zeziphi izondlo malunga nokutya kunye nezinye izinto zokutya ezinesayensi ezifana nokubiza 'ii-carbohydrate ezilinganayo.' Ngapha koko, i-USDA ibhekisa kwii-carbs ezifumaneka ewayinini ' Iicarbohydrate ngokwahluka . ' Oku kuthetha ukuba ii-carbohydrate azifumaneki ekutyeni; zizinto ezihleliyo emva kokuba kufunyenwe amanqatha kunye neeproteni, zenziwa ingxelo zaza zasuswa kwi-equation. Ezi 'zilingana ne-carbohydrate' zinento yokwenza nendlela umzimba esihambisa ngayo isiselo.
Iwayini iqulethe utywala, oqhubekeka esibindini.
Isibindi sakho siguqula utywala bube yi-acetate, eluhlobo lwamafutha umzimba onokuwasebenzisa njengee-carbohydrate, amanqatha, okanye iiproteni.
Umzimba wakho utshisa i-acetate kuqala, ngaphambi kwamanye amafutha, ukuguqula amandla ngaphambi kokuba ufumane ithuba lokujika ube ngamanqatha.
Ke ngelixa ungafuna ukubala iicarbs ngeglasi nganye yewayini oyiselayo, gcinani engqondweni ukuba ezi zinto zilingana ne-carbohydrate, ngakumbi kwiwayini ebomvu, zinokwenyani yehlisa iswekile yegazi , kunokuba uyithumele kwispike. Abantu abanesifo seswekile kufuneka baqhubeke nokubala iicarbs kwiwayini njengesiqhelo, kuba ukutya kakhulu kunokuba nefuthe elibi amanqanaba eswekile yegazi .
IiWayini ezigqibelele zokutya kweKeto
Ukuba ukunye ukutya kwe keto, injongo kukunciphisa ukutya okune-carb. Uninzi lwabantu kwizidlo zeketo ziyakonwabela ukutya utywala ngokuphakathi kubandakanya iwayini. Okona kubheja kwakho kukukhonza (i-ounces ezintlanu) zewayini eyomileyo; I-Champagne, i-rosé, kunye ne-Sauvignon Blanc zilungile ukubheja kwabamhlophe okanye i-rosés, ngelixa i-Pinot Noir (hayi iBurgundy) yeyona ibhetri yakho ibomvu.
Njani iiCarbs zewayini xa zithelekiswa nezinye iziTywala
Kwimeko yezinye iziselo ezinxilisayo, kuhlala kukho abaxube abakufumanayo. Uninzi lwemimoya e-distilled ine-0 carbs ngelixa i-liqueurs iphezulu kwi-carbs. Imimoya efakelweyo enjengevodka enencasa inokuba neswekile eyongeziweyo, ke kubalulekile ukuba ubala ii-carbs zakho wenza uphando lwakho ukuze ubone ukuba uphawu oselwayo longeza iswekile na kwimimoya yabo engenisiweyo. Iibhiya ezininzi ezikhanyayo nazo ziphantsi kakhulu kwii-carbs. Ukuba ungukutya okungqongqo, okulawulwa yi-carb, ukubheja kwakho kweyona carb isezantsi iziselo ezinxilisayo ngaphandle kwabaxube kubandakanya:
Isiselo UkuKhonza ubungakanani IiCarbs
IVodka, iTequila, iGin, iRum, iScotch 1.5 ounce 0g
I-Champagne eyomileyo Ii-ounces ezi-5 1g
Bud Khetha ibhiya Ii-ounces eziyi-12 1.5g
Iwayini leRosé elomileyo Ii-ounces ezi-5 2.4g
Ubhiya Michelob Ultra Ii-ounces eziyi-12 2.6г
IPinot Noir Ii-ounces ezi-5 3.4г
Ngelixa iglasi nganye yewayini inezinto ezinazo iikhabhathi, ijaji isaphumile ukuba zinokukuchaphazela njani na. Ezinye iwayini ezibomvu zinokunciphisa iswekile esegazini lakho, ngelixa ukusela kakhulu iwayini kunokunyusa iswekile esegazini yesifo seswekile. Ukuba ubala iikhabhathi ngenxa yezizathu zempilo, khumbula ukuba iwayini iqulethe inani eliphakathi leecarbs kwaye ngenxa yoko, kufuneka ikonwabele ngokumodareyitha.
Ibhdi Nesidlo Sakusasa Ubambiso Ukuhlawula Amatyala Amakhandlela Abagcini Usana Uzuko Uyilo Lokulala Dsigns
indlela yokubhala inqaku lothando
indlela yokuphatha izinto ngaphandle kwesipaji
Ngaba i-capricorn kunye negemini ziyavana
indlela yokuthambisa ilaphu ngaphandle kweempahla
ngam imizekelo yokuthandana iisayithi
I-Washington yipropathi yoluntu yoluntu